ကိုထွဋ်: ကမ္ဘောဒီးယား ကားအက်ဆီးဒင့်
၁ ရက်နေ့ည ကားတိုက်မှု
မနေ့ညက ကားတိုက်မှုမှာ နိုင်ငံခြားသား ခုနှစ်ယောက် အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ကားတိုက်မှုက တနလာင်္နေ့ မနက်အစောပိုင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး။
ကမ်ပူကြီးယား အန်ကော ကားကုပ္ပဏီက ညကားတွေပြေးဆွဲပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ည မှာ စီရမ်ရိကနေ ဗီယမ်နမ်ကို ပြေးဆွဲတဲ့ညကားက မနက် ၄း၁၀ လောက်မှာ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ လော်လီကားကို အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဝင်တိုက်မိတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားခုနှစ်ယောက် ဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေက တောင်ကိုးရီယား၎ ယောက်နဲ့ စပိန်နိုင်ငံသား ၃ ယောက်တို့ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီအထဲမှာမှ ၅ ယောက်က အမျိုးသမီးတွေပါ။
သယ်ဆောင်လာတဲ့ ခရီးသည်က ၃၄ ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ၂၇ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်စီရထားပါတယ်။ ရဲတွေကတော့ ဒီဖြစ်ပွားမှုဟာ ကားဒရိုင်ဘာ ရဲ့ အိပ်ငိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ကားဒရိုင်ဘာဟာ ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။
အဲဒီ အဝေးပြေးလမ်းဟာ ၂၀၁၁ ရဲ့ ခြောက်လ အတွင်းမှာကိုပဲ လူပေါင်း ၁၀၇၆ ယောက် သေခဲ့ပြီးပြီလို့သိရပါတယ်။
Posted by ကိုထွဋ် at Tuesday, August 02, 2011
ကားပုံကိုကြည့်ပြီး အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။
မ နဲ့ မောင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး မှုတ်လား တော်သေးတာပေါ့... ဒီလူတွေ နောက်လည်း သေမှာပဲလေ။ အခု သေသွားလည်း အေးတာပဲ။
ဟယ်..ကားကအဲလောက်တောင်ကြေမွသွားတာလား။ ကြောက်စရာကြီး.. ညကားစီးရမှာတောင် ကြောက်လာပြီ။ အချိန်ကုန်သက်သာလို့ စီးဖို့စဉ်းစားနေတာ။ မနက် ၄နာရီလောက် ဆိုတော့ ဘယ်နားမှာ ဖြစ်တာလဲ။ ဗီယက်နမ် ဘော်ဒါနားနီးနေပြီလား။
ကားမြင်ရတာနဲ့တင် တော်တော်လန့်စရာ လူတွေကတော့မတွေးဝံ့စရာပဲနော်..
သွားရင်းလာရင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ မေတ္တာပို့လေးတွေ လူသားတိုင်း ရွတ်ဖတ်နိုင်ရင် အဆိုးထဲကအကောင်းတော့ ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်ကွယ်။
အောင်မြန်လေးဗျာ... ကြောက်စရာအက်ဆီးဒင့်ကြီးပါလားဗျို့..။ တော်သေးတာပေါ့ကားကထောင်နေသေးလို့.:P:P:P:D
ပိုစ့်အသစ်တင်တော့ကွာ. မင့်ကားကြီးကြည့်ရတာ စိတ်ညစ်လို့ ...... ဂီတာ တီးနေတဲ့ မျှစ်တို့ ဘာတို့တင်တော့လေ
အမူးသမားများ မူးနည်း ၄၃ နည်း (အပိုင်း ၁)
Miss Myanmar at Miss Universe